Kwabo ba khuphela iinqwelo ezivela e-Rikooo kwaye abalahlekanga iimpawu okanye iimpawu
umbuzo Kwabo ba khuphela iinqwelo ezivela e-Rikooo kwaye abalahlekanga iimpawu okanye iimpawu
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #995 by DRCW
Ndiqaphele abantu abaninzi abanemiba yokulandwa kule ndawo, abalahlekelwa yimifanekiso yendiza, okanye iileyile ezimnyama kwiifayile ze-photoreal. Okokuqala ndivumele uchaze encinane malunga neFSX. IMicrosoft yaphuma ngeenguqu ezintathu kwidibanisi yebhokisi. I-Standard FSX, i-FSX Deluxe, kunye nokugqibela kwe-FSX Gold Edition. Ukuba unayo i-Standard FSX okanye i-Deluxe Editions kwaye awuzange uyihlaziye, uza kuba neengxaki ngezinye iindiza kunye neendawo. UMicrosoft waphuma ngeepakethe zeenkonzo ze-2 (SP1 & SP2) ngaphandle kokuhlaziywa okufakiwe, kuya kuba neengxaki. I-Auto Loader I-Rikooo inikeza imisebenzi kakuhle. Ndikunika iipatches ezifunekayo ngezantsi, ukukunceda ukulungisa le miba. Ndiyathemba ukuba kuya kunceda
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: tuncayboran40
Ixesha ukwenza page: 0.173 imizuzwana